Naya Post Nepal | एम’सि’सि मा सहमत नगर्नेलाइ तु’रुन्त सरकार बाट नि’कालियोस : मन्त्री झाँक्री
एम’सि’सि मा सहमत नगर्नेलाइ तु’रुन्त सरकार बाट नि’कालियोस : मन्त्री झाँक्री
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एम’सी’सीका विषयमा दोहो रो भूमिका खे’ल्न नहुने ब’ताएकी छन् । आज यहाँ पत्रका रसँग कु रा कानी गर्दै उनले सरकारमा ब’सेर एम’सि’सीको विषय मा दो’होरो भू मि’का खेल्न नहुने बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘कि त सरकार छोडेर सडकमा जानु परयो कि सरका रमा बसेर सडकमा जानु भएन ।’ सत्ता पनि चा,,हिने, सरकारको का ममा पनि वि’रो’ध गर्नुपर्ने हो भने यो वि’रो’धा भा’षपूर्ण कुराबाट स बै मु’क्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले थपिन्, ‘वि’रो’धा’भाष कुरा हुँदैन । पार्टीले नि’र्णय गर्छ भने ए क मिनेट सरकारमा बस्न मन छैन ।’सबै जिल्ला कमि टीलाई एम’सी सी’को वि’षयमा धा’रणा पठाउन आ”ग्रह गर्दै उनले एमसीसी ग’लत भए आफूहरु ब्या’क हुने बताइन्।
आफू अहिलेको सरकारको मन्त्री भएको भन्दै उनले सरकार ले गरे को नि’र्णयवि’रु’द्ध आफू जान नमिल्ने बताइन्। एमसीसी स्वीकार ग र्दा र अस्वीस्कार गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरामा सबैले बु’झ्न ज’रुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
पार्टीको सचिवालयले एमसिसी यथास्थितिमा पास नगर्ने नि’र्णय ग रेको भन्दै उनले यस विषयमा छलफल हुन ज’रुरी रहेको बताइन् ।
तत्कालीन समयमा केपी ओली ने’तृत्व’को सरकारले संसद्मा एम’सि ‘सी टेबुल गर्न चाहेकोे भन्दै उनले अहिले (नेकपा एमाले) को मौन’ ताले केही अ’सहज बनाएको बताइन्।न्युज२४
यो पनि ,, महिनामै करोडौ कमाउने सलमानको नि’धन पछि उनको सम्पत्ती कस्को हुन्छ ? गरे सलमानले खु’ला’सा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खानले महिनामा क’रोडौ कमाउँछन् । उनको कमाइ महिनामा १० करोड भन्दा माथि छ । सलमानले अहिलेसम्म विवाह गरेका छैनन्। विवाह नगरेकाले ५६ वर्षका उनको छो’राछोरी पनि छैन।
अन्य बलिउड कलाकारले जस्तै उनले कसैलाई स’न्तानका रुपमा अ’पनाएका पनि छैनन् ।बलिउ डका धेरै कलाकारले सन्तान अप नाएका छन् । उनले सन्तान पनि नअपनाएका का’रण उनको नि’धन पछि सलमानको सबै सम्पत्ती कसले पाउँछ भन्ने सबैको जि’ज्ञासा छ ।
उनको कुल सम्पत्ति २३ सय करोड भारतीय रु’पैयाँ हो। यस्तो अवस्थामा उनको सम्पत्तिको वा’रिस को होला ?
सलमानले यदी आफूले विवाह गरेको ख’ण्डमा र नगरी आफ्नो मृ”त्यु भएको खण्डमा आफ्नो सम्पत्ति कसको हुनेछ भनेर पनि खु”लासा गरिसकेका छन्।
३४ वर्षयता सलमान बलिउडका स्टा’र छन्। उनी हरेक चल चित्रमा काम गरेबापत् १०० करोडभन्दा बढी ज्या’ला लिन्छन्।
टाइम्स अफ इन्डियासँगको अन्तर्वार्तामा सलमानले भनेका छन् कि यदी उनले विवाह गरेभने उनको सम्पत्तिको आधी हि’स्सा उनको ट्रस्टमा जानेछ।
उनको ट्रस्ट संस्था बिइङ ह्युमनले गरिब तथा पी’डितलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यदी विवाह गरेनन् भने र उनको मृ”त्यु भयो भने उनको सबै स’म्पत्ति सोही ट्र’स्टमा जानेछ।
२०७८ फाल्गुन १२, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 337 Views